मैत्रीपूर्ण खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी – Digital Newspaper
July 31, 2017 July 31, 2017 nepsnews
क्लब मैत्रीपूर्ण फुटबलमा इंग्लिश क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडले नर्वेको क्लब भालेरीङगालाई पराजित गरेको छ । आइतबार राती भएको खेलमा युनाइटेडले भालेरीङगालाई ३ – ० ले पराजित गरेको हो ।
ओस्लोमा भएको खेलमा युनाइटेडलाई जित दिलाउन मौरिनो फेल्लानी, रोमेरो लुकाकू र स्कोट म्याकटोमिनेले समान एक एक गोल गरे । घरेलु टोलि भालेरीङगालाई पराजित गर्ने क्रममा युनाइटेडका फेल्लानीले पहिलो हाफको ४४ औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए ।
पहिलो हाफमा १ – ० ले अघि रहेको युनाइटेडले दोस्रो हाफमा थप दुइ गोल गर्यो । दोस्रो हाफको सुरुवातमै लुकाकूले गोल गर्दै युनाइटेडको अग्रता दोब्बर बनाए ।
त्यसपछि खेलको ७० औं मिनेटमा युवा खेलाडी म्याकटोमिनेले गोल गरेपछि युनाइटेडले ३ – ० को सहज जित पायो । युरोपियन फुटबलको नयाँ सिजन सुरुअघि तयारीका लागी युनाइटेड नर्वे पुगेको हो । यसअघि युनाइटेड प्रि सिजनको लागि अमेरिकामा इन्टरनेसनल च्याम्पियन्स कप खेलेको थियो ।
यस्तै समाचारको लागि हाम्रो facebook page like गर्न नभुल्नुहोला ||
← डाक्टरमाथि हातपात गर्ने दुई युवक पक्राउ
‘म नेपाली हुँ, गोर्खाली होइन’ →
यी हुन् विश्वमा सबैभन्दा महंगा शीर्ष १० युवा खेलाडी कति तलब सुबिधा छ ?
July 24, 2017 nepsnews Comments Off on यी हुन् विश्वमा सबैभन्दा महंगा शीर्ष १० युवा खेलाडी कति तलब सुबिधा छ ?
July 25, 2017 nepsnews Comments Off on अफगानिस्तान विरुद्ध अर्धशतक बनाउन सिर्फ दुर्इ रनले चुके दीपेन्द्र